Miantso ny FFKM handray andraikitra ny ankolafy telo ! – MyDago.com aime Madagascar
Magro Behoririka 18 Avril 11
Miompana be dia be tamin’ny fanentanana ny FFKM handray andraikitra amin’ny famahana ny krizy mba tsy hijery fotsiny ny loza efa mihatra sy mitatao amin’ny fireneny ny kabary rehetra teto amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka tamin’ity Alatsinainy 18 Aprily 2011 ity.
Malalatiana solontenan’ny « plate forme des associations » dia nanambara fa : ireny no manjo ny mpanongam-panjakana, hitan’ ny olona rehetra ny laingany. Sarotra ny hino fa tsy hangalam-bato ilay kely rehefa hanao amboletra ny fifidianana hoy ity vehivavy Mfm ity. Ny olona mendrika ho fidiana tsy mbola eto ka fifidianana inona no hatao ? Hatao ho lesona fa ratsy ny manongam-panjakana hoy izy.
I Sylvain indray dia nanamafy fa Ray aman-dReny eto amin’ny firenena ny FFKM koa antsoina hiditra lalina amin’ny fampihavanana ny samy Malagasy.
I Jeanson avy amin’ny MFM dia nanamafy hatrany izany : manainga ny rehetra hiantso ny FFKM hamaha ny olana, Ray aman-dReny am-panahy ianareo ka aza jerena fotsiny ny olonareo ambavan’ny loza hoy izy.
Avoahay ny namanareo miaramila any am-ponja ry tafika Malagasy, miaraka amin’ireo gadra politika rehetra hoy kosa I Manoela tamin’ny anjara fitenenany.Tokony ho roahina amin’izao herinandro masina izao ny devoly manelingelina ny firenena hoy izy
Manjavozavo tahaka ilay lohatenin’ilay fandaharana tao amin’ny TVM ny Alahady teo ny fisainan’I Andry Rajoelina hoy I Zafilahy. Tsy misangisangy ny SADC hoy izy koa dia nampanantsoin’I filohan’ny Namibie mihitsy izy. Nifanaraka ny frantsay sy ny SADC hoy I Zafilahy fa na i Madagasikara na Côte d’Ivoire no ho azy koa dia i Côte d’Ivoire no nosafidin’ny frantsay .Ny SADC izany no mamaha ny olona eto Madagasikara. Voaantso i Andry fa tsy voaasa satria dia mpanongam-panjakana ary voasazy izy. Voafidim-bahoaka ve i Andry no manapaka sy mandidy hanao tetezamita irery. Ny marina dia hiala nenina ny SADC hoy hatrany I Rakotomandimby Zafilahy.
Toy ny nataon’ireo mpikabary teo aloha dia niresaka momba ilay fandaharana manokana nataon’I Andry Rajoelina tao amin’ny TVM I Mektoub : Miseho be mokony i Andry, miseho ho matotra ary “examen de passage” iny omaly iny. Isika no be mokodoha satria terena nefa mbola eto ihany. Tsy miova ny mpanao gazety mpanjakana fa mbola misolelaka hatrany hoy I Mektoub.Aoka mba ho paska mitoetra ity 2011 ity fa tsy mandalo fotsiny hoy ny kabariny.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 18/04/2011 (1/2) miisa 10.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 18/04/2011 (2/2) miisa 11.
Auteur Solo RazafyPublié le 19 avril 2011 19 avril 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique
3 pensées sur “Miantso ny FFKM handray andraikitra ny ankolafy telo !”
misaotra anareo mampita itony vaovao itony.Mila fiheverana mihitsy ity resaka communication ity fa tena rakotra foza ny tanana
saika adinoko, mirary Paska sambatra hoantsika rehetra izahay aty lavitra atyNy mino tsy maintsy mandresy e!
20 avril 2011 à 3 h 34 min
tsy ampy ve izay ny fitsabahan’ny fiangonana sy ny fivavahana amin’ny raharaham-pirenena ary mbola tsy mahatsiaro ve isika fa anjaran’ny olona manan-jo no mikarakara ny fiara-miainaNY sy ny ho aviny?
i Kristy ary nilaza hoe » tsy to an-tany ny Fanjakako »
koa samia isika mandray andraikitra ary manaova Paska sambatra ny mino rehetra!!!
Précédent Article précédent : Madagascar : le nombrilisme d’une dictature en disgrâce.
Suivant Article suivant : Positivons toujours ! Préparons nous au retour de la constitutionnalité !